Igalari yeSithombe seMpawu zeTekisi eziThabileyo zeTV
by UNancy Basile
Abalingiswa be-cartoon abathandekayo abayinto entsha. I-curvy cutie uBetty Boop wayezibophelela emacaleni e-30s ngelixa ezinye iibhomu ziboniswa kwiifutshane ezifayo, njengeRed Red ngo-1945 i- Droopy cartoon, ebizwa nge- Wild and Woofy .
I-Anime yenye yeendlela ezidume kakhulu zeethathu zokubumba ezibonisa amabhinqa athile kunye namadoda. Ngenene, kwihlabathi le-anime, awukwazi ukugubha ikrele kwi-adventure ephilileyo ngaphandle kokushaya amaninzi amanqatha ngokucoca okanye u-guys nge-popec pecs.
Omnye unokugqithisa ukhetho oluthile okanye ukutshatyalaliswa, njengaleyo ye- anthropomorphism , ngokuthandana nohlobo oluthile lwesimboli somfanekiso. Abaninzi beempawu zetekethi kwiingqungquthela ezithandwayo zeemifanekiso zecattoon zinezinto ezikhangayo kunye nobuntu abonwabayo abaninzi.
ULana Kane, Archer
Lana Kane - Skorpio - Umculi. FX
ULana Kane we- Archer umboniso ngu-agent we-ISIS kuphela okwazi ukugcina intloko epholileyo ngexesha lokuhlaselwa. Unesimo sengqondo kunye nezakhono ezimvumela ukuba azilungiselele kwaye alwe, kungakhathaliseki ukuba isambatho sakhe ngelo xesha. ULana ulawula izixhobo ngokulula njengoko ephethe izigebengu zamazwe ngamazwe.
Akabonakali nantoni na kwiphina ingubo engakhuphisi iirebe zakhe kwaye ibonise umnxeba wokucoca. Kule ngqungquthela yaseScorpio , uthabatha abasebenzi baseYacht kunye no-Skorpio ngokwakhe, egqoke iingubo ze-Fiocci.
Eyesithandathu, Ukuhlaziya iRift
Eyesithandathu - Ukunyusa iRift. Sy Fy
Eyesithandathu, ye-show ehlaziya i-Rift , iphakamisa uluhlu lwabalingisi be-cartoon esecaleni ngenxa ye-mission yayo: ukulala ngesondo. Unokusebenza njengeGosa leNzululwazi kwi-spaceship Jupiter 42, kodwa ekugqibeleni uyisondo ebesenza i-2,000 iindidi ze-orgasms kwiilwimi ezingama-600.
Umlingiswa wakhe ubuqili kwaye ngokuqhelekileyo kuphuma izicwangciso zokuqhelisa abasebenzi ukuba bangene kwiinkathazo, nangona xa izicwangciso zakhe zibandakanya ukukhohlisa intshaba. Kananjalo uyazi ukugcina uKaputeni Chode onwabileyo kangangokuthi akafanekanga ukungaziboni.
Kwesinye seziqwenga zakhe ezihamba phambili, i- Android Love , i-side ye-Six yeyona nto ibonakalisiwe xa yena kunye nekhoboka elithile, abayishumi, bethetha ngemvelaphi yabo kunye nokuba kuthetha ukuthini isondo.
Tenzin, The Legend of Korra
I-Tenzin - IThe Legend of Korra. Nickelodeon
I-Tenzin yindodana ka-Aang, kwi- The Legend yeKorra, owayenguye avatar kunye ne-Airbender ekugqibeleni, kwi- Avatar: I-Airbender yokugqibela . I-Airbender ngokwayo, i-Tenzin iye yaxanduva lokufundisa i-avatar entsha, i-Korra, indlela yokuqonda ukugoba umoya.
Yintoni eyenza i-Tenzin kangangokuba i-sexy iquka umzimba wakhe we-muscular kunye namandla, kunye namandla akhe angaphakathi, okwenza uxolo lube lukhulu nakwiintshaba. Izwi lakhe elijonge, elinikezwa nguJK Simmons ( Juno ), linceda nangeempawu zakhe.
Kwesinye seziqwenga ezishisayo, kwaye uMninimzi u-... , i-Tenzin iqhutywe emva kokuba uKorra aqonde ukuba ubenomdla kunye noLin Beifong ngaphambi kokutshata noPema.
I-Sterling Archer, i-Archer
I-Fugue kunye ne-Riffs -Archer. FX
I-Sterling Archer yinkampani ekhokelayo kwintsimi kwi-ISIS, i-spy agency yamazwe ngamazwe. Njengentlola, uhlala ebomini. Nangona kunjalo, Umcibisi akayiyo ikrele elibukhali kwisitrato sesigxina, ngokuqhelekileyo ulungelelanisa izicwangciso zeejensi.
Nangona i-Archer ingabonwa i-shirtless, kwaye ngezinye izihlandlo ingenasiphelo, inayo i-penchant ye-turtlenecks emnyama, ekwazi ukubonisa umzimba wayo ocacileyo ngengubo. Xa u-Archer ehlalisa abanye abesifazana, ngokuqhelekileyo baqhamuka kuba ngu-intshaba, beza kwidrama kunye nomdla.
Kwesinye seziqendu ezisezantsi, i -Limited , Umgcini we-Archer uzalisekisa iphupha lakhe lokuze alwe nomntu phezu kwesitimela esishukumisayo. Ufumanisa uthando lwakhe ngo-ocelots njengoko ebuyela emotweni yakhe yangasese.
05 ka 06
Black Dynamite, Black Dynamite
Black Dynamite. Ukuguqula abantu abadala
Omnye ujonge ubuso bakhe obuhle, i-Afro epholileyo, kunye nomzimba oqhekekileyo kakuhle bonke abafazi bafuna ukwazi xa kufike ekubanjeni kunye no-Black Dynamite, umlingiswa ovela kwi-self-titty show.
I-Black Dynamite yindlela yokubethelela ezitalatweni, ngezinye iinkqubo kuthatha umsebenzi wezemisebenzi, kodwa isebenza rhoqo kwi-kung fu. Ubeka umthetho kunye nezwi lakhe elinzulu elinamazwi amakhulu kunye neendonga eziqinileyo.
Kwisiqephu sikaJackson ezintlanu zikaYe amehlo okanye nje ukuyixabisa , i-Dynamite ivuke i-shirtless kwiphupha elibi ukufumana abafazi abane ebhedeni lakhe.
Molotov Cocktease, The Venture Bros.
I-Molotov Cocktease - I-Venture Bros
Ukhetho oluqhelekileyo lwababhinqa bama-coosplayers kwiindibano, umlingiswa weMolotov Cocktease ovela kwi -Venture Bros unika yonke ingqalelo.
UMlotov ngumntu ovela eRashiya onobungqineli obushushu noBrck Samson, indoda leyo isizathu sokuba enxibe intliziyo yamehlo. Umntu wakhe oyingqayizivele uyabulala ngentlungu kwaye uyathwala ibhande le-titanium.
Kwisiqendu A ssassinanny 911, uMlotov unomsebenzi wokunyamekela abazalwana be-Venture ngexesha u-Brock engekho. Siyambona ekhumbuza malunga ne-Brock yokuhlangana ngethuba lokuqala, nangona i-Hank ehluphekileyo iwalela nzima.
Abalingiswa beCattoon abongezelelweyo
Fumana uludwe olongezelelweyo lwabalingisi bekhathuni ngokusebenzisa izixhobo ezilandelayo:
10 Iimpawu zeTtoon zeTV ezona zixhasiweyo (# 1 yiNgqungquthela!)
50 Abalinganiswa beCattoon Best of All Time
Hlangana nabalinganiswa beArcher
Iimpumelelo eziphezulu kwiSouth Park ngamnye
I-8 Day Day Talk Talk Show hosts
Unokufumana njani iiTikiti kwi-"Real" "Show Real"
Iintetho ezili-10 eziPhambili zibonisa izihloko zengxoxo
Unokufumana njani iiTikiti kwi-"I-Steve Harvey Show"
Ubani "Owasindileyo: I-China" Abaqhubi?
"I-Minute Yokuyifaka" I-Movin 'On Up Game
Amagqabantshana ama-5 aphindaphindiweyo ku-David Letterman
'Ingozi!': Imbali emfutshane
Iimvumi ezibuhlungu kwiTV
Indlela yokufumana amathikithi akhululekileyo 'I-Tonight Bonisa inkwenkwezi uJimmy Fallon'
I-Gay Talk Show Hosts ezidumile
I-Staphylococcus aureus engamelana ne-Methicillin (MRSA)
Igalari yeConstellation Pictures
UMbhishophu Alexander Walters: iNkokeli yeNkokeli kunye noMbutho weLungelo loLuntu
Solution Solution Inkcazo
Isikhokelo seKharityhulam yeeKhaya - IiNkqubo zeeHonsi
Iintsikelelo zokuza kwakho kweNkcazo kwiNqatha eziShenxe eziManyathelo
I-Acids Most Acids kwiLizwe
Ukusebenzisa i-Calculus Ukubala I-Income Elasticity of Demand
Uthando lwebali likaCybele noAttis
I-Crossover yi-Kwame Alexander-2015 uJohn Newbery Medal Winner
Umthandazo WamaKristu Ukuthuthuzelwa Emva kokulahlekelwa
'Tan' kunye 'noTanto'
Iingcebiso ezi-6 eziPhambili zoPhando kwiMbali
UMTHETHO Ulinganisa ukungeniswa kwiNkomfa yeNtlalontle yeNtshona
Imbali kaVasant Panchami, Ukuzalwa koThixokazi wamaHindu uSarwatiwati
Indlela yokwenza nayiphi na imfundiso engakumbi
Nokian Hakkapeliitta R2 SUV Ukuhlaziywa
Funda Ixabiso kunye neTeknoloji yokuBumba kwiPaintyi noCwecwe
I-Ace yakho Uvavanyo lwe-Econometrics
Ukutshintshwa kwiDiski ye-Brake okanye ye-Brake
I-Christmas Best Page ye-Book Review
Iingxelo ze-Inspirational About Change
IiDoodle kunye neZentangles
Admission College College